Ny mpikarakara tokantrano rehetra dia nahitàna toe-javatra iray izay ilaina amin'ny legioma na legioma vaovao mba hanomanana sakafo. Kanefa, nibanjina tao amin'ny vata fampangatsiahana izy ireo, nahatakatra fa nilatsaka ny ain'ny fatran'ny legioma.
Ary, mazava ho azy, ny tsirairay dia nametraka ny fanontaniana hoe: "Ahoana no nahatonga izany? Nividy azy ireo omaly aho. " Indrindra ho an'ireo mpikarakara ny mpikarakara legioma rehetra, ary ireo liana fotsiny, dia nanangona zava-mahadomelina izay hanampy ireo legioma, voankazo ary zavamaniry vao haingana mba hahafahana manao izany. Minoa Ahy, miaraka amin'ireo toro-hevitra ao amin'ny fridge anao dia ho vaovao foana!
1. Ny tongolo dia hitoetra maharitra mandritra ny 8 volana raha toa ka napetraka ao amin'ny kapron kapron na kiraro.
Ny jiro tsirairay dia tokony hisaraka amin'ny kofehy, elastika na tady. Tsara homarihina fa ny lozika dia nojariana tsara indrindra ao anaty efitrano maina, fa tsy ao anaty vata fampangatsiahana.
2. Tokony hapetraka ao anaty tavoahangy plastika ny zezika maitso ary atambatra ao amin'ny frizidera.
Zava-dehibe ny fanononan'ny tongolobe maitso kely. Teo aloha, nanasa ireo tongolobe, nanosika azy ireo tamin'ny lamba fanosotra ary nopetapotra kely. Mialà amin'ny loharano izany. Avy eo dia arotsaho ao anaty tavoahangy plastika ny tongolo ary atokàny ny fonony. Amin'ny alalan'io fomba fitahirizana io dia mitana ny vitaminina mahasoa ny tongolo.
3. Mampiasà kitapo manokana ho an'ny voankazo sy legioma.
Ny fambolena sy ny voankazo dia mamoaka entona etylène mandritra ny vanim-potoanan'ny fepetra, izay manampy ny voankazo hihinana. Saingy, indrisy, ny entona toy izany dia manana fiantraikany mahatsiravina amin'izy ireo, mamorona atmosfera tena tsara ho an'ny fahalavoana sy ny fahanterana. Mba hitazonana ny voankazo vao haingana dia ampy ny mampiasa kitapo manokana ho an'ny voankazo sy legioma izay manakana ny gazy etylène ary hisorohana ny fanatsarana ny fahamendrehana, manomboka amin'ny intelo in-droa ny fatran'ny voankazo sy legioma.
4. Ny tahiry no tsara indrindra ho voninkazo - ao anaty rano. Apetrany eo amin'ny cellophane izy ireo ary apetraho eo amin'ny fotony miaraka amin'ny tarika elastika ary apetraho ao anaty vata fampangatsiahana.
Ity fomba iray ity dia tonga lafatra amin'ny fitahirizana parsley, cilantro, basil ary zana-kirana maitso.
5. Ny herin'ny maitso maitso maimaim-poana dia tokony hajaina amin'ny sehatra rehetra.
Ohatra, ny thme vaovao dia tsy maintsy mifatotra amin'ny kofehy ary mihantona amin'ny rivotra misokatra, mba haharitra ela kokoa.
6. Ho an'ny berry vao, ampiasao vinaingitra vinaingitra.
Mba hanomanana vahaolana mamelombelona mandritra ny herintaona, mila manamboatra ny vinaingitra (fotsy na poma) ianao ary rano ao anatin'ny 1:10. Atsofohy ny voankazo ao anatin'ny vahaolana mandritra ny segondra vitsivitsy, dia afoy ny rano, manadio ny voankazo amin'ny rano mangatsiaka ary ampidiro ao anaty kamiao. Aza manahy, tsy hahatsiaro ny tsiron'ny vinaingitra ianao! Miaraka amin'ny fikarakarana toy izany, dia ho maina mandritra ny herinandro ny fihinanam-bilona, ​​ary ny trondron-dranomamy - efa ho tapa-bolana tsy misy fanalefahana na famolavolana loko.
7. Ny sisa tavela amin'ny guacamole na avocado dia tokony homena menaka oliva tsy misy loto, alohan'ny hametrahana azy ao amin'ny vata fampangatsiahana.
Misy fomba maro ahafahana mitahiry ny avokado maitso sy vaovao, ary ny solika solika iray dia toy izany. Toy izany ihany koa ny fangalarana avocado pulp.
8. Aza mamela bibilava misy ovy.
Indrisy, eo anelanelan'ny legioma sy ny voankazo dia misy ireo tsy mandefitra ny "fanatrehany". Ny iray amin'ireo fanoherana toy izany dia ny tongolobe sy ny ovy. Tokony hovaina ao amin'ny toerana mangatsiaka mangatsiaka ny tongolo, izay ahafahany mijanona hafotra mandritra ny 2-3 volana.
9. Fa mba hanitarana ny fiainan'ny ovy, mila mametraka apples amin'izany ianao.
Ny fomba toy izany dia hanampy amin'ny fisorohana sy fanimbana rongony.
10. Ireo apples dia heverina ho iray amin'ireo voankazo faran'izay mangidy indrindra. Saingy mba hitazonana azy ireo vaovao, mila mandinika amim-pitandremana ny zava-misy ianao fa ny poma tsara dia tsy nandriatra pòm.
Ny poma tsara dia afaka mijanona ela be, saingy raha misy poma kely na "malemy" eo amin'izy ireo, dia afaka manimba ny zavatra hafa rehetra. Noho izany dia diniho tsara io antsipiriany io.
11. Manararaotra ny olana mahasorena amin'ny tsofa "mahatsiravina" dia hanampy ny ampahany biriky.
Raha manapaka ny mofomamy ary maniry ny hitazona azy vaovao, dia asio sombin-diloam-bolo eo amin'ny sisin'ny fofona. Izany dia hamonjy azy tsy ho maina mandritra ny fotoana maharitra.
12. Ny safidy hafa iray hitehirizana ny hafanana amin'ny tsofa dia ny fampiasana taratasy vita amin'ny parchment na papango.
Manofa sombin-tsigara amin'ny taratasy, ary apetaho ao anaty kitapo plastika. Mijanona ao amin'ny efitranon'ny varavarankely, amin'ny toerana mafana.
13. Manitatra ny hafanan'ny zavamaniry isan-karazany dia hanampy oliva menaka.
Alohan'ny hampangatsiatsiahana ny kibonao, rosemary, salohim-bozaka na oregano, manaparitaka tsara azy ireo, mametraka azy amin'ny bobin'afo ary manidoka menaka oliva. Izany dia hamonjy vitaminina mahasoa amin'ny herisetra, ary hanatsotra ny fizotran'ny sakafo. Ity fomba fitsaboana ity dia tsy mety amin'ny mint, dill sy basil - mila ampiasaina vaovao.
14. Manaova ny vata fampangatsiahana ary tandremo ny fitsipiky ny famokarana vokatra.
Ho an'ny fanangonam-bokatra ny vokatra dia ampiasaina foana ny foto-tsakafon'ny tsenan'ny serivisy, izay manampy amin'ny fampiroboroboana ny mombamomba ny vokatra mifanaraka amin'ny tsirairay, mba hitehirizana ny fahamendrehany, ary koa ny fanesorana ny vokatra "fanodikodin-doha".
15. Tokony ho voatahiry ao anaty rano ny aspanga, toy ny voninkazo manaloka.
Esory ny kisendrasendra, atsangano ao anaty rano ary ento ao anaty vata fampangatsiahana. Amin'ity fomba ity dia hanampy azy ireo hihinana voalavo maitso sy maina mandritra ny herinandro.
16. Mba hanitarana ny hafanan'ny akondro, afaka mampiasa sarimihetsika sakafo ianao.
Ity trosa ity dia hanampy amin'ny fanitarana ny fiainan'ny akondro mandritra ny 3-5 andro, mba tsy hisorohana ny mainty sy ny fako. Tadidio koa fa ny gazy dia mamokatra gazy etylène kokoa noho ny legioma sy voankazo hafa, ka andramo ampitahaina amin'izy ireo.
17. Ny salady maitso dia tokony ho voatahiry ao anaty vilia voaisy tombo-kase miaraka amin'ny sarimihetsika sakafo. Zava-dehibe ny mametraka ao anaty papier tsy tapaka, izay hisorohana ny fanatsarana ny fahosana tafahoatra.
18. Ho an'ny mamy ny seleria, siramamy sy broccoli, mila mamatotra azy ireo miaraka amin'ny foibe ara-tsakafo.
Ity fomba ity dia hanitatra ny fiainan'ny vokatra mandritra ny herinandro 4.
19. Mitahiry legioma sy voankazo ao anaty tavoahangy miaraka amin'ny takelaka.
Ny fitaovana hafa amin'ny plastika plastika dia siramamy miaraka amin'ny lamba, izay, tsy toy ny fitahirizana, dia mitahiry ny voankazo sy ny legioma maina mandritra ny fotoana maharitra.
20. Arovy ny vata fampangatsiahana.
Raha misy zavatra manimba ao amin'ny vata fampangatsiahana, dia ilaina ny miteraka haingana "ny fanasitranana". Ny bakteria mampidi-doza dia mijanona ao amin'ny vata fampangatsiahana mandritra ny fotoana lava, miantraika amin'ny hafanana avy amin'ny vokatra, ka manadio tsikelikely ny zava-drehetra ao amin'ny vata fampangatsiahana ary esorinao.
21. Tokony ho voatahiry araka ny tokony ho izy ny tomato.
Aza mitahiry voatabia amin'ny kitapo plastika. Amin'ity endritsoratra ity dia hiroborobo haingana izy ireo ary hanomboka ho rotaka.
Ny voatabia tsy miendrika dia tokony ho voatahiry miaraka amin'ny sisin'ny trompetra na ao anaty boaty misy kitapo mandra-pahasambarana. Ho fampiharana ny dingana, dia afaka manamboatra voankazo ho voatabia ianao, izay hampitombo ny fihinanana amin'ny fanampiana entona etysela.
Ny voatabia tena tsara dia voaaro tsara amin'ny hafanana hafanana avy amin'ny masoandro. Asio tsimok'aretina toy izany miaraka amin'ny sisin'ampongabendanitra iray ao anaty sehatra iray, tsy mifampikasoka.
Ary voatahiry ao anaty vata fampangatsiahana ny voatabia mando be loatra, fa alohan'ny fampiasana dia ento any amin'ny efitra fisainana.
22. Ampiasao ny kapa amin'ny tavoahangy plastika mba hanokafana sy hanakanana harona plastika miverimberina.
Ity fomba ity dia hanampy amin'ny fanakanana ny fahavoazana tsy hiditra ao anaty kitapo. Nefa aoka ho azonao antoka foana fa ilay fonosana alohan'ny fanakatonana dia maina, raha tsy izany dia mety hampidi-doza ny "mamboly".
23. Tokony hotehirizina ao anaty frizera ny akoho.
Ny masom-boly ao amin'ny frizera dia hijanona ela kokoa, ary hanatsotra ny dingana amin'ny fanomanana sakafo amin'ny fampiasana gny. Ny mpanangom-bokatra marevaka dia mora miala amin'ny lavaka.
24. Aorian'ny fividianana voaniho dia mangà azy ireo.
Haharitra ela kokoa ny fihinana voanio raha hotifirinao. Mba hanaovana izany, dia manaparitaka ireo voanjo amin'ny tavy vita amin'ny pensée, voarakitra miaraka amin'ny taratasy parcha aloha, ary manolora ao amin'ny oven mandritra ny 15 minitra amin'ny 170 degre hatramin'ny volamena volomparasy.
25. Mitahiry holatra amin'ny kitapo taratasy.
Manadino ny polyethylene amin'ny fametrahana fungi isan-karazany. Packages dia fitaovana tena tsara ho an'ny fampiroboroboana ny fivalanana sy ny fahamendrehana, izay mitarika ho an'ny vovobony sy ny fanimbana ny holatra. Apetraho ao anaty kitapo taratasy ao anaty vata fampangatsiahana na toerana mangatsiatsiaka ny holatra.
26. Mampiasà fanamarihana iray izay tsy tokony ho voatahiry ao anaty vata fampangatsiahana.
Sakafo feno fitiavana: renibe avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao sy ny fahaizany manokana
Eny, ny zava-dehibe dia ny mangeja anao mampiasa ny lovia!
Karazan-kafe Breziliana: 17 sakafo tsara indrindra
22 sakafo frantsay izay mendrika ny miezaka
Zavatra tsy tokony hovonjena amin'ny lafiny rehetra
17 "fanandramana" ao amin'ny lakozia izay azonao ihinanana
12 voankazo sy legioma tena mahavariana
Ny mikraoskaopy elektronika + sakafo = maso mahagaga!
Ireo mpampiasa ao amin'ny tambajotra dia ampiharina amin'ny endritsoratra maingoka, ary tena mampihomehy!
Zava-miaina 10 mifandraika amin'ny sakafo, izay toa tsy mampidi-doza
25 tena hafahafa sakafo haingana, izay azo antoka fa te-hanandrana anao
Salady ho an'ny fahasalamana sy ny toe-tsaina
Lifshack: manokatra labiera vita amin'ny tavoahangy taratasy
55 porofo fa ny Japoney no mpanadio tsara indrindra!
Ahoana no handoavana lanja aorian'ny 40?
Lindsay Lohan dia nogadrain'ny bibilava iray
Drew Barrymore dia nialona an'i Cameron Diaz tamin'ny vadiny!
Dress from batiste
Curtains for terrace
Diphyllobothriasis - fitsaboana
Ny tongon-tsoavaly - ny tombony sy ny fahasimbana amin'ny fiantrana
Ahoana no fomba handravahana rindrina ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny?
Azo atao ve ny mampinono ny renim-pianakaviana?
Tilapia ao anaty lafaoro
Blaogin'ny zaza amin'ny atidoha
Pumpkin compote amin'ny menamena amin'ny ririnina
Organza voninkazo amin'ny tanany manokana
Curd mamy ho an'ny biscuit cake
Toe-ponenana ho an'ny sarimihetsika vehivavy bevohoka
Famantarana ny fitondrana vohoka amin'ny herinandro 3